सेयर बजारमा चलखेल बढ्योः मुल्य तलमाथि गर्न अर्थमन्त्री र गर्भनरको बहाना ! - Everest Dainik - News from Nepal
सेयर बजारमा चलखेल बढ्योः मुल्य तलमाथि गर्न अर्थमन्त्री र गर्भनरको बहाना !
काठमाडौं, चैत २६ । नानाभाँती बहाना र हौवा पिटाएर सेयर मुल्य तलमाथि गराई नाफा लिन पल्केको एउटा समुहले फेरि एकपटक अर्थमन्त्री र गर्भनरको नाम भजाएर आईतबार सेयर मुल्य बढाएको छ ।
ससाना र कम ज्ञान भएका लगानीकर्तालाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप सेयर बेच्न र किन्न बाध्य पार्ने यो समुहले आईतबार अर्थमन्त्री र गर्भनरले बजार सुधारको भाषण गरेको हल्ला फैलाएर मुल्य बढाउने खेल खेलेको छ ।
दुई साताअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सेयर बजारलाई अनुपात्दक क्षेत्र भनेको हौवा पिटाएर मुल्य घटाउन यही समुह छलफल भएको थियो ।, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।